USB Memory Stick — MYSTERY ZILLION
December 2008 edited March 2009 in Help Desk
Unknown device ပဲ ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဗျာ..... USB Device Not Recognized ဆိုတဲ့ စာတန်းပဲ ပေါ်လာနေတယ်..... ဘာမှ လဲ လုပ်လို့မရဘူး...... OS က XP SP2တင်ထားတယ်..... Stick က နှစ်ခုလုံးကို ဖြစ်နေတာ.... ( TwinMos2G & Kingston2G) ..... ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ.... ကူညီကြပါဦး......:77:
ဝင်းဒိုးနဲ့ပဲ ဆိုင်မယ်ထင်တယ်။ ဒရိုင်ဘာပေါ်ပဲ မူတည်သွားမယ်ထင်တယ်။ ဗစ်စတာတင်ထားတဲ့ စက်နဲ့ စမ်းကြည့်ပါလား။ ဒီမှာတော့ ဗစ်စတာ ဗားရှင်းပေါ်မှာတောင် မူတည်ပြီးမှရတာပါ။ ဗစ်စတာတင်ထားတဲ့ စက်တိုင်းတောင်မရဘူး။:):):)
http://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php?t=2056 ဒီမှာလေးသွားကြည်ပါ နော် \_:D/
မရရင် ကို bluesky ပြောသလို ပဲ driver ပြန်စစ်ကြည်ပေါ့၊ ရမှာပါ ။
ကျွန်တော်လည်း ဖြစ်ဖူးတယ် ဆိုင်ကိုသွားပြတော့ ပြတင်ပေါက် ပြန်တင်လိုက်တဲ့ ဗျို့ ပြန်တပ်လိုက်နော်.
memory stick ka bal lo phit lel ma ti bu
my computer mhar lel ma paw bu
mee ka kha na linn p pyan pate twar tal
ku nyi kya par oo
@ Ko Johnson.... If you can, you should talk only in Myanmar or English... , If you have difficulties about with Myanmar typing.. I want to suggest you to write in English ! Ok
usb ports တွေ သေချာပြန်စစ်ကြည့်ပါဦး
တစ်ခြား port ကိုသုံးကြည့်ပါလား။ MotherBoard ပေါ်က port ကိုယ်တိုင်လည်း ပျက်သွားတတ်တယ်။ ကျနော့စက်တစ်လုံးမှာဆိုရင် အပေါက်၄ ခုရှိတာ ၂ခုက သုံးလို့မရဘူး။ မလောက်လို့ထပ်တိုးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ USB Hub ဒါမှမဟုတ် USB PCI card နဲ့စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါလား။